Febrile Fits – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ကလေးငယျတဈခြို့က အဖြားကွီးပွီဆိုရငျ( ကိုယျပူခြိနျ၃၈°C ) ကြျောပွီခွလေကျတှကှေေးဆနျ့ပွီး အဖြားကွီးပွီး တကျခွငျးကို ကွုံတှရေ့တတျပါတယျ။အဓိကကတော့ ဖှံ့ဖွိုးနတေဲ့ ကလေးရဲ့ဦးနှောကျက ကိုယျပူခြိနျတကျ( အဖြားကွီး) တဲ့ ဒဏျကို လူကွီးတှလေောကျ ခံနိုငျရညျမရှိလို့ပါ။
မမေတေို့အနနေဲ့တော့ ကလေးဘာကွောငျ့ပဲတကျတကျ စိုးရိမျတတျကွပါတယျ။ တကယျလို့ ရိုးရိုးအဖြားကွီးလို့တတျတာပဲဆိုရငျဒီအခကျြ ၇ ခကျြနဲ့ ကိုကျညီလရှေိ့ပါတယျ။
အသကျအရှယျ အနနေဲ့ အသကျ၅နှဈအောကျ ယောကျြားလေးတှမှော ပိုဖွဈတတျပါတယျ။
တဈကိုယျလုံး ခွထေောကျရော လကျပါ ကှေးလိုကျဆနျ့လိုကျပုံစံနဲ့ တကျ တတျပါတယျ။
တဈခါတကျရငျ ၁၅ မိနဈထကျပိုမကွာတတျပါဘူး။
ရိုးရိုးအဖြားကွီးလို့ တကျခွငျးသခြောမယျဆိုရငျတော့ သိပျစိတျပူဖို့မလိုပါဘူး။ကလေးဟာ တကျပွီးနောကျပိုငျးမှာ ဦးနှောကျထိခိုကျမှုမရှိတတျပါဘူး။ဒါပမေယျ့အဖြားကွီးပွီးတကျ တတျတဲ့ကလေးဟာ နောကျတဈခါ ဖြားရငျလညျးတကျနိုငျခွရှေိပါတယျ။
ကလေးအဖြားကွီးပွီးတကျခဲ့မယျဆိုရငျ မမေတေို့ ဘာတှလေုပျပေးနိုငျမလဲ?
ကလေးကို ဘေးစောငျးပွီးထားပေးထားပါ။မကျြနှာကို ကွမျးပွငျဘကျသို့စောငျးပေးထားပါ။
တကျနခြေိနျမှာ ကလေးပါးစပျထဲကို ပစ်စညျးမြားထညျ့ခွငျး၊ သတိလညျလာစရေနျ ကလေးအားရိုကျခွငျး။
ကလေးကို ထိခိုကျမိစသေော ခြှနျထကျသော၊ လေးလံသောအရာမြားကို အနီးအနားမှ ဖယျထားပေးပါ။
ကလေးကို အပူခြိနျကစြရေနျ ရစေိုဝတျနဲ့ သုတျပေးနိုငျပါတယျ။
စိတျကို တညျငွိမျအောငျထားပွီး ဆေးရုံ၊ ဆေးခနျးသို့ သှားရနျစီစဉျပါ။
ကလေးငယ်တစ်ချို့က အဖျားကြီးပြီဆိုရင်( ကိုယ်ပူချိန်၃၈°C ) ကျော်ပြီခြေလက်တွေကွေးဆန့်ပြီး အဖျားကြီးပြီး တက်ခြင်းကို ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အဓိကကတော့ ဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့ ကလေးရဲ့ဦးနှောက်က ကိုယ်ပူချိန်တက်( အဖျားကြီး) တဲ့ ဒဏ်ကို လူကြီးတွေလောက် ခံနိုင်ရည်မရှိလို့ပါ။
မေမေတို့အနေနဲ့တော့ ကလေးဘာကြောင့်ပဲတက်တက် စိုးရိမ်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်လို့ ရိုးရိုးအဖျားကြီးလို့တတ်တာပဲဆိုရင်ဒီအချက် ၇ ချက်နဲ့ ကိုက်ညီလေ့ရှိပါတယ်။
အသက်အရွယ် အနေနဲ့ အသက်၅နှစ်အောက် ယောကျာ်းလေးတွေမှာ ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။
တစ်ကိုယ်လုံး ခြေထောက်ရော လက်ပါ ကွေးလိုက်ဆန့်လိုက်ပုံစံနဲ့ တက် တတ်ပါတယ်။
တစ်ခါတက်ရင် ၁၅ မိနစ်ထက်ပိုမကြာတတ်ပါဘူး။
ရိုးရိုးအဖျားကြီးလို့ တက်ခြင်းသေချာမယ်ဆိုရင်တော့ သိပ်စိတ်ပူဖို့မလိုပါဘူး။ကလေးဟာ တက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ဦးနှောက်ထိခိုက်မှုမရှိတတ်ပါဘူး။ဒါပေမယ့်အဖျားကြီးပြီးတက် တတ်တဲ့ကလေးဟာ နောက်တစ်ခါ ဖျားရင်လည်းတက်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။
ကလေးအဖျားကြီးပြီးတက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် မေမေတို့ ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်မလဲ?
ကလေးကို ဘေးစောင်းပြီးထားပေးထားပါ။မျက်နှာကို ကြမ်းပြင်ဘက်သို့စောင်းပေးထားပါ။
တက်နေချိန်မှာ ကလေးပါးစပ်ထဲကို ပစ္စည်းများထည့်ခြင်း၊ သတိလည်လာစေရန် ကလေးအားရိုက်ခြင်း။
ကလေးကို ထိခိုက်မိစေသော ချွန်ထက်သော၊ လေးလံသောအရာများကို အနီးအနားမှ ဖယ်ထားပေးပါ။
ကလေးကို အပူချိန်ကျစေရန် ရေစိုဝတ်နဲ့ သုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ကို တည်ငြိမ်အောင်ထားပြီး ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းသို့ သွားရန်စီစဉ်ပါ။